MOFON’AINA ZOMA 20 NOVAMBRA 2020 – Athis Fanantenana
MOFON’AINA ZOMA 20 NOVAMBRA 2020
Ary ho an’Izay maharo anareo mba tsy ho tafintohina, ary hametraka anareo tsy hanan-tsiny eo anoloan’ny voninahiny amin’ny firavoravoana, 25 ho an’Andriamanitra tokana, Mpamonjy antsika, amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika anie, ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin’ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amena
Joda dia anisan’ireo mpanoratra ao amin’ny Testamenta Vaovao nanao ho vaindohan-draharaha ny fiarovana ny finoana sy ny fiangonana Kristianina. Lazainy mazava eto amin’ity Epistily nosoratany ity fa nisy nahatery azy nanoratra ho an’ny fiangonana. Hoy mantsy Joda : « Ry malala, raha manao izay zotom-po rehetra hanoratra aminareo aho hilaza ny amin’ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery ahy hanoratra aminareo, hananatra mba hiezahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an’ny olona masina. 4 Fa misy olona sasany efa niditra misokosoko, izay voasoratra fahiny ho amin’izany fahamelohana izany, dia olona ratsy fanahy, izay mamadika ny fahasoavan’Andriamanitsika ho fijejojejoana sady mandà ny Andrian-tokana, dia Jesosy Kristy Tompontsika. 5 Ary ta-hampahatsiaro anareo aho na dia efa fantatrareo rahateo aza ny zavatra rehetra » Joda 3-5. Noho ny amin’ireo olona miditra an-tsokosoko eo amin’ny fiangonana manimba ny finoana ireo no antony iray lehibe nanoratany ho an’ny fiangonana. Raha mamarana ny Epistily nosoratany i Joda dia namarana izany amin’ny filazana sy fanambarana ny maha-izy-azy an’i Jesoa. Eo anatrehan’ny zava-manahirana lalovan’ny fiangonana dia tsarovy fa Jesoa dia
Maaro ny mino tsy hanan-tsiny (and 24)
« Ary ho an’Izay maharo anareo mba tsy ho tafintohina, ary hametraka anareo tsy hanan-tsiny eo anoloan’ny voninahiny amin’ny firavoravoana »
Hoy Jesoa hoe « indro Aho momba anareo mandrakariva ». Ny hoe momba araka izay efa fantatsika dia manana hevitra fiarovana. Eto dia manamafy izay voasoratr’i Matio Joda. Tena manana ny hery sy ny fahefana rehetra tokoa Jesoa hiaro ny mino Azy, hiaro ny fiangonany. Miaro ny mino tsy hanantsiny, izany hoe miaro ny mino tsy hanota. Ary izany fiarovan’ny Tompo izany dia hatramin’ny fotoana hiverenany indray hitsara ny velona sy ny maty. Te hampianatra antsika Joda fa tena azo atao tsara ny mitoky amin’io fiarovan’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy io.
Raha tsy nomba antsika Jesoa dia efa ela no efa rava ny finoana Azy. Ary noho isika Kristianina sy fiangonana manaiky harovany koa no mbola mampijoro ny fiangonana mandraka ankehitriny. Tsy misy maharombaka tokoa mantsy izay eo ambany elatry ny Tompo.
Tompo sy Mpamonjy (and 25)
« Ho an’Andriamanitra tokana, Mpamonjy antsika, amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika anie, ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin’ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay »
Rehefa antsoina hoe Tompo Jesoa dia maneho ny maha-Andriamanitra manam-pahefana Azy izay ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao. Efa nomena Azy rahateo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Eo anatrehan’ny fanenjehana, eo anatrehan’ny fampianaran-diso nitady ahazo vahana teo amin’ny fiangonana dia nampahatsiaro ny maha-Tompo an’i Jesoa Joda. Sady Tompo Izy no Mpamonjy, izany hoe manana ny fahefana mamonjy ny fiangonany. Mamonjy ny fiangonany amin’ny hery sy ny fahefana mpampahory eto amin’izao tontolo izao. Ary raha ny marina tsy hoe vao hamonjy Izy, efa vitany sy tanterany teo amin’ny hazo fijaliana izany famonjena izany. Toky ho an’ny mino sy ny fiangonany izany.
MOFON’AINA ALAKAMISY 19…